‭ Magrudy.com - Uhleko lokufunda nokubhala lwakwa-Ace: Gr 2: Teacher's guide ‬
Uhleko lokufunda nokubhala lwakwa-Ace: Gr 2: Teacher's guide
Uchungechunge lwezifundo ze-ACE lusiza ukunikeza abafundi indlela ehlelekile futhi eqoqene yokuzifundisa ulwazi lwamagama, ukubhala nokufunda, kwethulwa kwe-grama kanjanlo nokwethulwa kwe-phonic. Uma isetshenziswa nochungechunge lwe-ACE life skills, lunikeza isifundo esiphelele mayelana namakhono empilo. Kanti lusiza futhi ukunikeza othisha nabafundi indlela ehlelekile okungenziwa ngayo lezizinhlelo ezimbili zokufunda (amakhono okufunda nawempilo angasetshenziswa ngawodwana). Lesi yisibuyekezo sochungechungelwe-ACE esivele ikona. Kanti ifakwe okuthile okusha ukuze ihambisane kahle nekharikhalamu ebuyekeziwe. Kukhona okusha okuqukethwe, kanjalo nemidwebo emisha. Kanti lesisifundo sibhekiswe kubafundi abamnyama, abafunda ulimi lokuqala.